पशुपतिनाथको छत्रावली चोइटियो, अशुभको संकेत – Nep Stok
पुष ४, २०७८ आइतबार 173
काठमाडौं : पशुपतिनाथ मन्दिरको गजुरमा रहेको छत्रावली चो’इटिएको छ । मन्दिरमा बाँदरहरू चढ्ने, उ’फ्रने र ह’ल्लाउने गरेकाले छत्रावली चो’इटि’एको हुन सक्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाइ छ । छत्रावली चो’इटि’नुलाई संस्कृतिविद्ले अशुभको संकेत मानेका छन् । गजुरसँग दायाँबायाँ रहेको पाता छत्रावली हो । यसमा सुनको जलप लगाइएको हुन्छ ।
कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले पुरानो पनि भएको र बाँदरहरूले चलाइरहने भएकाले चो’इटि’एको हुनसक्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले खट बाँ’धेर माथि पुगी बाँ’धेर अ’ड्काउने काम भएको छ । मन्दिरको छानोबाट ख’सेर भक्तजनलाई कुनै चो’टप’टक नलागोस् भनेर सम्पूर्ण सुरक्षा अपनाइएको छ ।’ खट बाँ’धेर माथि पुग्नका लागि कोषका तर्फबाट क्षमा पूजा गरिएको थियो ।
एक साताअघि चो’इटि’एको छत्रावलीलाई मर्मत गर्नका लागि कोषले पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थानलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमका अनुसार छत्रावलीको अवस्था र त्यसको मर्मत वा पूरै नयाँ बनाउनेबारे विज्ञसहितको टोलीले छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । उनले मर्मत गर्दा हुने जानकारी कोषलाई गराएको बताए ।
कोषले कोषकै संस्कृति महाशाखाका प्रमुख डम्बरबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा विसेट नाइट अरुण बिसेट, पालोवाला भण्डारीहरू सहितको मर्मत समिति बनाएको छ । पशुपतिनाथका मूलभट्ट गणेश भट्टको निर्देशनमा छत्रावलीको मर्मत कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाएपछि मर्मतको काम सुरु भएको छ । अहिले सशस्त्र र पहरा गणका दुई दुई जनाको २४ घण्टे सुरक्षा मन्दिरमा छ ।
संयोजक कार्कीले भाँ’चि’एको पाता फेर्ने र सोही आसपासबाट पानी चुहिने ठाउँ पत्ता लगाउने काम भएको जानकारी दिए । ‘गजुरसँगै रहेको छत्रावली चो’इटि’नु भनेको अशुभको संकेत हो,’ विसेट नाइके अरुण विसेटले भने, ‘गजुरको मुनिको भागमा पानी नछिर्ने गरी तामाको किलाले ठोकी पाताहरू मिलाएका छौं ।’
कोषका सदस्यसचिव डा. थापाले भने, ‘कालीगढमार्फत् चो’इटि’एको छत्रावली मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । नयाँ बनाउनु परे सय वर्षसम्म केही नहुने गरी बनाउने योजना बनाए पनि मर्मतले हुने भएपछि काम अघि बढेको छ। केही दिनमै सम्पन्न हुनेछ ।’अन्नपूर्ण पोष्टमा यो मा यो खबर छ ।’
Nextसरकारी कर्मचारीलाई बिदैबिदा